Sadio Mane oo ku tilmaamay Jurgen Klopp inuu yahay macalinka ugu wanaagsan adduunka – Gool FM
(Liverpool) 21 Nof 2019. Weeraryahanka kooxda Liverpool ee Sadio Mane ayaa ku tilmaamay macalinka reer Germany ee Jurgen Klopp inuu yahay kan ugu fiican adduunka.
Jurgen Klopp ayaa ku hoggaamiyay kooxda Liverpool ku guuleysiga tartanka Champions League xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, waxaana xilli ciyaareedkan loo arkaa kooxaha ugu cad cad ee ku guuleysan kara horyaalka Premier League.
Liverpool ayaa haatan hogaanka u heysa horyaalka Premier League iyagoo leh 34 dhibcood, waxayna siddeed dhibcood ka sareeyaan kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Leicester City, halka Man City oo booska saddexaad fadhisa ay ka sareeyaan sagaal dhibcood nadiif ah.
Haddaba xiddiga reer Senegal ee Sadio Mane ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Qof walba wuu arki karaa waxa uu Jurgen Klopp u qabtay kooxda Liverpool iyo magaaladan, iyo tayada uu ku raaxeysanayo macalin ahaan”.
“Waxaa jira macallimiin badan oo wanaagsan Yurub, laakiin waxa aan dhihi karo ayaa ah in macalinkeena uu marwalba heysto erayo sax ah iyo waxyaabo uu ku maareeyo kooxdiisa, gaar ahaan ogaanshaha sida loola dhaqmo iyo saameyn loogu yeesho ciyaartoyga, sidaas darteed waa kan ugu fiican adduunka” ayuu hadalkiisa ku sooxiray Sadio Mane.